‘गुड क्याप्टेन बन्न तानाशाही बन्नैपर्छ’
अन्तर्वार्ता 14 पटक पढिएको
पुरनबहादुर जोशी (अध्यक्ष)रोटरी क्लब अफ मकवानपुररोटरी क्लव_ मकवानपुरमार्फत् अहिले नानी बिरुवा रोपणको काम भइरहेको छ । यो नानी विरुवा अवधारणाचाहिँ के हो ?
धरै संघसंस्थाहरुले वृक्षरोपण गर्ने गरेका छन्, जब म युनिभर्सिटीमा पढ्थेँ तब त्यहाँ यो नानी विरुवाको विषयमा धेरै कुराहरु जानकारी पाएको थिएँ । आज विश्वमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा पर्यावरण संरक्षणको कुराहरु आइरहेको छ । विश्वमा वातावरण प्रदूषणको दोष एकअर्कालाई थोपिरिरहेको छ । अमेरिकन देशले भन्छ, यो एसियन देशहरुले गरेको प्रदूषण हो र एसियन देशहरु भने अन्य देशलाई आरोप लगाइरहेको छ । जसले जसलाई आरोप लगाइरहे पनि यसले मानव जातिलाई असर गर्छ । त्यसैले, हामी सबै मिलेर वातावरण संरक्षणमा जुट्नुपर्दछ भन्ने सोचले आजभन्दा दुई वर्षअघि यो नानी विरुवा रोप्ने सोच मैले बनाएको थिएँ । तर, यो काम कसको माध्यमबाट गर्ने भन्नेमा अन्योल थियो । म रोटरी क्लब अफ मकवानपुरको अध्यक्ष भएपछि सबै रोटरिएनहरुको सहयोगमा मैले यो कामलाई अघि बढाएको छु । नानीभन्दा हाम्रो समाजमा सानासाना बच्चाहरुलाई बुझ्ने गर्दछौं । हो, यही नानी भन्ने वाक्यांशलाई बिरुवामा जोडेर हामीले काम अघि बढाएका छौं । नेपालमा धेरै संघसंस्थाले वृक्षरोपण त गर्छन् तर, त्यो हुर्कन नपाउँदै कसैले उखेलेर फालिदिन्छ, अनि हामी एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका हुन्छौं । तर, जन्माएरमात्र हुँदैन त्यसलाई हुर्काउनु पनि पर्छ । त्यही अवधारणाअनुसार प्रत्येक घरमा हामीले विरुवा लगाइदिने र त्यसको संरक्षण गर्नलाई त्यो घरको अभिभावकलाई सचेत गराउने उद्देश्य लियौं । घरको साना सदस्य साना नानीबाबुको नाममा बिरुवा रोपिदिने र आफ्ना छोराछोरीलाई जस्तै गरी हुर्काउनुहोस्, यो तपाईहरुको छोराछोरी हो भनेर जिम्मा लगाइदिने काम हामीले सुरु गरेका हौं । अभिभावकलाई उसको छोरा र छोरीसँग भावनात्मक हिसाबले जोडिदिने जसको कारण त्यो अभिभावकले आफ्ना छोरा र छोरीजस्तै गरी त्यो बिरुवाको संरक्षण गर्छन् र बिशाल रुख बन्छ, जसले वातावरण संरक्षणमा सघाउ पु¥याउँदछ ।
अन्य संघसंस्थाले गर्ने वृक्षरोपणभन्दा तपाईंहरुले एउटा फरक ढंगले वृक्षरोपणको काम गरिरहनुभएको छ । तर, एउटा अभिभावकलाई उसका छोराछोरी जस्तै विरुवालाई माया गराउन भावनात्मक सम्बन्ध विस्तार गर्नुभएको छ । तर, त्यसरी अभिभावकलाई जिम्मा दिँदैमा त्यो बिरुवा हुर्कन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छ र ? तपाईहरुले पछि पनि अनुगमन, निगरानी राख्नुहुन्छ कि हुन्न ?
भावनात्मक हिसाबमा कुनै मानिसलाई जोडिदियो भने मान्छेले काम गर्छ । जहाँ भावना हुन्छ, त्यहाँ माया पनि हुन्छ । जस्तो उसको आफ्नो छोरीको नाममा अमृता छ भने उसको घरमा रोपिएको बिरुवा पनि अमृता हो भन्ने कुरा हामीले सिकाएपछि जसरी उसले आफ्नो छोरीको हेरचाह गर्छ, त्यसैगरी त्यो बिरुवाको पनि हेरचाह गर्छ । त्यसैले हामीले यसलाई नानी बिरुवा प्रोजेक्टका रुपमा अघि बढाएका हौं ।
हेटौंडाको हुप्रचौर वरिपरि विरुवा रोपेर नानी बिरुवा प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभएको छ, यो सिजनमा तपाईंहरुले कति बिरुवा रोप्नुहुन्छ ?
यो साउनभरी नै हामीले धेरैभन्दा धेरैको घरमा पुगेर उसको साना नानीबाबुको नाममा बिरुवा रोप्ने काम गर्छौं । आफ्नो साना छोराछोरी नभए नातिनातिनी, नातिनातिनी नभए अरु काकामामाको छोराछोरीको नाममा बिरुवामा नेम ट्याग लगाएर हामी यो साउनभर नै घरघरमा नानी बिरुवा रोप्ने काम गर्छौं । म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी तपार्इंको घरमा आउँदा हामीलाई सहयोग गर्नुहोला । तपाईहरुलाई हामी बिरुवा दिन्छौं । बिरुवासँगै परिवारको सदस्यको नाम पनि दिन्छौं, विरुवा संरक्षणमा जाली पनि दिन्छौं । मात्र तपाईंले त्यो विरुवा हुर्काएर आफ्नो वरिपरिको वातावरण हराभरा बनाउनुहोस् ।
तपाई लामो समयदेखि मकवानपुरमा शैक्षिक सेवामा लागिरहनु भएको छ । त्यसको अलावा सामाजिक काममा पनि महत्वपूर्ण भूमिका निभाइरहनुभएको छ । त्यो सँगै रोटरी क्लब अफ मकवानपुरको अध्यक्षसमेत भइसक्नु भएको छ । रोटरीमा तपाईंको यो एक वर्षे कार्यकालमा के कस्तो काम गर्ने लक्ष्य राख्नुभएको छ ?
खासगरी हामीले पर्यावरण जोगाउन नानी विरुवा प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिसकेका छौं । म एउटा शैक्षिक क्षेत्रको व्यक्ति हुँ, सरकारले पनि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ । तर, पनि कतिपय सामुदायिक विद्यालयहरु छन्, त्यसमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीहरु छैनन् । त्यसमा पनि हामीले सहयोग गर्ने लक्ष्य बनाएका छौं । र सानासाना बालबालिकाहरुका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी शिविर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ । र, हामीले अर्को एउटा महत्वपूर्ण काम पनि गर्दैछौं । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका हरेक वडामा एउटा–एउटा लाइब्रेरी स्थापना गर्ने सोच बनाएका छौं । हेरौं, यो कत्तिको सफल हुन्छ । मेरो एक वर्षको कार्यकालमा त्यो कतिको सम्भव हुन्छ ? म गर्छु, साथै म अध्यक्ष नभए पनि त्यो कामलाई निरन्तरता दिन सक्छु । १९ वटै वडामा लाइब्रेरी स्थापना गरी त्यसको संरक्षण, सञ्चालनको लागि पनि हामी दीर्घकालीन योजना बनाउने छौं । मेरो कार्यकालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी फोकस गरेर कार्यक्रमहरु बनाउँदैछौं ।
रोटरी क्लव मकवानपुरको मातहतमा रहेर काम गर्ने युवाहरुको संस्था रोट्र¥याक्ट क्लब अफ मकवानपुर पनि छ, तपार्इंको कार्यकालमा ती जुझारु युवाहरुलाई कसरी सामाजिक काममा परिचालन गर्नुहुन्छ ?
एउटा कुरा के छ भने कुनै पनि क्लब वा संस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको लिडरसीप हो, लिडरसीप राम्रो भयो भने राम्रो काम हुन्छ । रोटरी र रोट्र¥याक्टमा धेरै युवाहरु छन्, ती युवाहरुलाई परिचालन गर्नुपर्छ । म निकै खुसी पनि छु किनकि युवा शक्ति मेरो हातमा छ । र, युवा शक्तिलाई सामाजिक काममा परिचालन गर्नेछु । नानी विरुवा प्रोजेक्टको काममा पनि रोट्र¥याक्टर भाइबहिनीहरुले महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छन् । युवाहरुको हिम्मतलाई मार्नु हुँदैन । अघि बढ्न दिनुपर्दछ । संस्थाको एउटा बडी भनेको युवा शक्ति नै हो । मेरो कार्यकालमा रोट्र¥याक्टलाई हदैसम्मको परिचालन गर्नेछु । म जहाँ जान्छु, रोट्र¥याक्ट पनि त्यहीँ जान्छ ।
तपाईं लामो समयदेखि शैक्षिक सेवा गरिरहनु भएको छ, साथै अन्य संघसंस्थामा रहेर पनि समाजसेवा पनि गरिरहनु भएको छ । वास्तवमा यो शैक्षिक सेवा गर्नमा तपाईंलाई बढी आनन्द आउँछ कि सामाजिक सेवा गर्न ?
समाजको सेवा गर्न त जहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ । म एउटा निजी शैक्षिक संस्था पनि सञ्चालन गरेर बसेको छु । जति कम्युनिटीलाई सेवा गर्न आनन्द आउँछ, त्यति निजी सेवा गर्न आनन्द नआउँदो रहेछ । म आधुनिक विद्यालय, हेटौंडा क्याम्पसमा हुँदा पनि मैले शैक्षिक गुणस्तर बढाउनेबारे धेरै कामहरु गरेँ । त्यो काम मैले व्यक्तिगत बलबुताले गरेँ । र, म रोटरी क्लबमार्फत जाँदा अझै म समाजसँग नजिक हुन सक्छु भन्ने लागेर यतातिर पनि लागिरहेको छु । यो सामाजिक सेवा गर्दा मलाई समाजसँग अझ नजिक बनाइदिन्छ, ममा शक्ति बढाइदिन्छ, युवा शक्ति पनि मेरो साथमा हुन्छ भनेर म संस्थामार्फत् पनि समाजसेवामा जोडिइरहेको छु । रोटरी क्लबको अध्यक्ष भएर एक वर्षमा मैले धेरै कामहरु गरेर देखाउनेछु ।
हेटौंडामा तपाईंजस्ता धनसम्पत्ति कमाउने व्यक्तिहरु धेरै छन् । धन कमाउने व्यक्ति सबैले समाजसेवा गर्छन् भन्ने पनि छैन, तपाईलाई चाहिँ समाजसेवामा जोडिन के कुराले प्रेरित ग¥यो ?
मानिसले कुनै दिन काम गर्छ भने आनन्द प्राप्तीको लागि गर्छ । कोहीलाई पैसा जम्मा
गरेर आनन्द हुन्छ भने उसले पैसामात्र जम्मा गर्ने गर्दछ । कोही भने समाजमा योगदान गरेर, पैसा खर्च गरेर आनन्द प्राप्ती गरिरहेको हुन्छ, त्यसैले आनन्द हरेक मानिसहरुको सोचमा निर्भर हुन्छ । मेरो सवालचाहिँ समाजसेवा गर्दा धेरै आनन्द आउँछ । पैसा भएरमात्र हुँदैन । पैसा खर्चिएर समाजसेवा गर्ने भावना पनि हुनुपर्दछ । म पनि गरिब वर्गबाट हुर्किएर आएको मान्छे हुँदा म समाजसेवामा निकै रुचि राख्छु । मेरो बुबा एउटा सिपाही हुनुहुन्थ्यो । मैले पनि निकै संघर्ष गरेको छु । त्यतिबेला मैले सोचेको थिएँ कि कुनै दिन म धेरै धनसम्पत्ति कमाएँ भने समाजसेवा गर्छु भनेर । एकदिन सबैले कमाएको सबैथोक छोडेर जानु छ । कात्रोको त कुनै गोजी हुँदैन । समाजमा कुनै योगदान गर्न सकियो भने त्यो कहिल्यै मर्दैन ।
तपाईंले भर्खरै मात्र पारिवारिक पृष्ठभूमिको कुरा अलिकति निकाल्नुभयो । वास्तवमा तपाईंको पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तोे थियो ? अलिकति गहिरिएर बताइदिनुस् न ।
मेरो पुख्र्यौली घरचाहिँ पश्चिम नेपालको स्याङ्जाको वालिङमा हो । मेरो बुबा सिपाहीमा जागिरे हुनुहुन्थ्यो । जागिरको शिलशिलामा मलाई पनि इन्डिया लैजानुभयो । मैले पनि त्यहाँ घुमेँ, पढेँ, धेरै कुराहरु सिकेँ । बुवाआमाहरुले पढ्नुभएको थिएन । मलाई पढाएर आफ्नो देशमा गएर सेवा गर भनेर पठाउनुभयो । त्यसैक्रममा म यतातिर आएँ । मेरो घरमा केही पनि थिएन । एउटा सिपाहीले कति नै आम्दानी गर्न सक्छ र ? तर, मलाई बुबाआमाले शिक्षा दिए, चेतना भरिदिए । मलाई संघर्ष गर्ने धेरै प्रेरणाहरु बुबाआमाले दिनुभयो । बाधाहरु पन्छाउँदै पन्छाउँदै आत्मविश्वासले काम गर्नुपर्छ। र, लामो संघर्षपछि म यो स्थानमा आइपुगेँ ।
तपाईंलाई शैक्षिक क्षेत्रमा वा अन्य क्षेत्रमा पनि निकै हक्की स्वभावको हुनुहुन्छ, अलिक कडा स्वभावको हुनुहुन्छ भनेर चिनिनुहुन्छ, वास्तवमा तपाईंले आफूलाई भित्रबाट चाहिँ कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ?
मेरो बुबा फौजी भएको हुँदा म पनि फौजमा हुर्किएको मान्छे । फौजमा बस्दा मलाई एउटा साथीले सल्लाह दिएको थियो । एउटा फौजमा दुई तरिकाको मान्छे हुन्छन् । एउटा ‘लोएल लेफ्टिनेन्ट’ र अर्को ‘गुड क्याप्टेन’ हुन्छ रे । लोयल लेफ्टिनेन्ट जो हुन्छ त्यो तानाशाही प्रवृत्तिको हुन्छ, कुनै पनि कुरालाई राम्रोसँग जग बसाल्नुपर्छ भने त्यो मान्छे लोयल लेफ्टिनेन्ट हुनु जरुरी छ । घरको जग राम्रो बसाउन मान्छेहरु जेसुकै किसिमको हत्कन्डा अपनाउनुपर्छ । कुनै पनि कुरा राम्रो बनाउनुपर्छ भने तानाशाह बन्नैपर्छ । मैले आधुनिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउन तानाशाह भएँ । तानाशाहमार्फत् गएर राम्रो सिस्टमको विकास गरिसकेपछि म गुड क्याप्टेन भएँ । त्यसैले गुड क्याप्टेन हुनको लागि तानाशाही बन्नैपर्छ ।
2584285	Times Visited.